ဒီသီချင်းကိုပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီးအဆိုရှင် Diana Krall ရဲ့ဆိုဟန်ကိုကြားဖူးစတုန်းကတော့ သိပ်ပြီးစိတ်ဝင်တစား မရှိလှခဲ့တာအမှန်။ သူမရဲ့ဆိုဟန်ကကျွန်မကိုသိပ်မစွဲဆောင်နိုင်ပေမယ့် စာသားတွေကိုတော့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ခံစားလို့ရပါတယ်..နှလုံးသားရှိသူမို့ :)) ခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒီသီချင်းကိုပြန်ဆိုလာတဲ့ တရုတ်စင်္ကာပူလူမျိုး Olivia Ong ရဲ့ ဆိုဟန် ဆိုပေါက်ကလည်း ချစ်စရာကောင်းပါတယ်..သူမရဲ့ ဆိုဟန်ကတော့ ချိုချိုအေးအေးလေးပါ..အခုလိုသီချင်းအကြောင်းလေးပြောကြစတမ်းဆိုရင်တော့ သီချင်းရဲ့ ဖြစ်တည်မှူအကျဉ်းလေးကို နည်းနည်းပြောပါရစေ။ ဒါကလည်းကျွန်မကို အင်မတန်စွဲလမ်းစေခဲ့တဲ့၊ ခုလည်းတစွဲတလမ်းနားထောင်နေမိစေတဲ့ သီချင်းလေးမို့ရယ်။
ရေးသူ -- ပန်းချီ at 3:55 PM9comments
"အမည်မသိ မိုးပန်းချီ :)"
ရေးသူ -- ပန်းချီ at 1:39 PM6comments
၂. ရေချိုးခန်းထဲမှာ သီချင်းပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင် အော်ဟစ်ဆိုပြီး ရေချိုးရတာကို ကြိုက်တယ်.. (အိမ်နီးနားချင်း များနှင့် အခန်းနီးနားချင်းများ နားဒုက္ခခံတော်မူကြပါကုန် (အသံသာ ရှာပါတယ်..ဟက်)
၃. ရုံးတက်ချိန် ၈း၁၅၊ အလုပ်စလုပ်ချိန် ၈း၄၅ လို့ကိုယ့်ဘာသာသတ်မှတ်ထားရတာကိုက အင်မတန်ကြိုက်စရာ (၁၅ မိနစ် မနက်စာ၊ ၁၅ မိနစ် ဘာညာကွိကွ ladies room :))
ရေးသူ -- ပန်းချီ at 7:37 PM 8 comments